Hatezeram-bahoaka amin’ny delestazy : nodoran’ny fokonolona ny Jirama Farafangana | NewsMada
Hatezeram-bahoaka amin’ny delestazy : nodoran’ny fokonolona ny Jirama Farafangana
Tsy mbola mandray andraikitra ihany ity fitondrana ity, amin’ny olana diavin’ny vahoaka. Nodoran’ny fokonolona ny foiben’ny Jirama any Farafangana manoloana ny delestazy, efa miseho manerana ny Nosy. Ailika any amin’ny Jirama foana ve ny andraikitra?
Mahatsiravina! Nahery vaika ny hatezeram- bahoaka manoloana ny fanapahana ny famatsiana herinaratra na delestazy tany Farafangana. Nodoran’ny fokonolona ny foiben’ny Jirama, ahitana birao enina, may avokoa ny antontan-taratasy rehetra kirakirain’ny orinasa, ny faktioran’ny mpanjifa, sns. Nisy nangalatra ny vola 6 tapitrisa Ar tao anaty vata vy mafy hidy fitahirizam-bola. Nosamborin’ny mpitandro filaminana ny olona dimy ary naratra ny zandary roa nandritra ny fihetsiketsehana.
Raha ny fantatra, tsy tonga ara-potoana ny famatsiana solika satria tsy mahazaka fiarabe intsony ny tetezana ao Analabe, eo anelanelan’i Manakara sy Farafangana. Efa ela no simba ity tetezana ity, saingy tsy nandray fepetra sy andraikitra mihitsy ny ao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy. Vokany, tsy ampy ny solika hampihodinana ny milina any Farafangana, ka gropy roa amin’ireo dimy ihany sisa no afaka nampiasain’ny Jirama, nitarika ny delestazy any an-toerana.
Ailika ny andraikitra
Tsy tongatonga ho azy ity hatezeram-bahoaka ity, toy ny tranga teny Soamahamanina, fa vokatry ny tsy fijeren’ny fitondrana ny sosialim-bahoaka sy ny toekarena ho an’ny mpandraharaha. Hanamarinana izany, valy boraingina ny notenenin’ny minisitry ny Angovo vonjimaika, ny herinandro lasa teo, nanilihany ny delestazy any amin’ny Jirama. “…anjaran’ny Jirama ny famokarana herinaratra,…”, hoy izy. Fantany tsara anefa, ary ao anatin’ny asany ny fiahiana ankapobeny ny lafiny herinaratra, ny mandrafitra ny politikan’ny angovo, ny manapa-kevitra ny saran’ny faktiora ho an’ny mpanjifa, sns. Anjaran’ity minisitera ity, ny miady hevitra amin’ny mpamatsy vola (FMI, ohatra), amin’ny fepetra horaisina amin’ny Jirama (nomena ny Symbion power ny fitantanana ny eny Mandroseza??)
Sao hanapotika ny Jirama sy ny orinasam-panjakana hany sisa tavela, toy ny Air Madagascar no tena tanjona, araka ny baikon’ny mpamatsy vola ihany?
Fehiny, azo adika fa tena fitondrana “hiady” amin’ny vahoaka no misy ankehitriny, aseho amin’ny endriny samihafa. Toy ny fitifirana vahoaka tany Fenoarivo Atsinanana, ny hetsiky ny Foroche any Antsiranana, sy ny tranga maro… Nilaza ny Pr. Zafy Albert fa omby 800 tamin’ireo 900 no lasan’ny dahalo any Maintirano, homena ny Sinoa,…Mampieritreritra!!!